विपन्‍नले कसरी बाँच्‍ने ? महानगर भन्छ : ‘खुलामञ्‍चमा खाना नबाँड्नू’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अभियन्ता भन्छन् - ‘हामी सकेसम्म सफा गर्छौं, तैपनि हामीले खुवाउँदा फोहोर भएको छ भने अझ सफा गर्न तयार छौं तर खाना बाँड्नै बन्द गर भन्नुचाहिँ आपत्तिजनक हो ।’
कार्तिक १८, २०७७ गोकर्ण गौतम
काठमाडौँ — अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगाना स्वयंसेवकका साथ हरेक दिन दिउँसो २ बजे खुलामञ्च पुग्छन् । त्यहाँ भेला भएका झन्डै २ सय जनालाई निःशुल्क खाना वितरण गर्छन् । खाना खाने समूहमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरको बाहुल्य हुन्छ । अशक्त र असहाय पनि हुन्छन् ।
दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई लकडाउनले आहत बनायो । बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौधौ भएर छटपटिएकालाई राजधानीका खुलामञ्च, कालीमाटी, पशुपतिलगायत ठाउँमा मनकारीहरूले निःशुल्क खाना खुवाउन सुरु गरेका थिए, जुन अधिकांश क्षेत्रमा अझैं निरन्तर छ । चैत १४ गतेबाट हन्ड्रेड ग्रुपले यो पुण्यकर्म थालनी गरेको थियो । यसका संस्थापक बब्लु गुप्ताका अनुसार अहिले पनि पशुपति र खुलामञ्चमा दैनिक ४ सय जनालाई निःशुल्क खाना खुवाइन्छ । यसमा ‘हाम्रो सानो प्रयास’ लगायत अन्य अभियानले सहकार्य गरेका छन् । गुप्ताले पनि महानगरको निर्णयको विरोध गरे । ‘हामी दैनिक खुलामञ्च र पशुपतिमा खाना खुवाउँछौं, अहिलेसम्म महानगरपालिकाले रोकेको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘तर, कतिपय साथीहरूलाई रोकेको र महानगरपालिकाले रोक्ने निर्णय गरेको भन्ने सुनें । हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’
हन्ड्रेड ग्रुपले खुलामञ्चमा बिहान ९ बजे र साँझ ४ बजे खाना खुवाउँछ भने पशुपतिमा साढे १२ बजे । यसका लागि समूहका झन्डै २० जना स्वयंसेवक खटिन्छन् । खानाको समस्या भएकाहरूको आग्रहमै निःशुल्क खाना वितरणलाई निरन्तरता दिइएको गुप्ताले बताए । ‘नागरिकहरू कति भोका छन् भनेर सडकमा आएर बुझ्नुपर्‍यो नि । खाना नबाँड्नु भनेर मात्र हुन्छ ?’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘जस्तोसुकै स्थितिमा पनि हामी खाना खुवाउन रोक्दैनौं । जसरी पनि खुवाउँछौं । प्रहरीले अवरोध गर्‍यो भने झडप नै हुन्छ ।’ खाना खुवाउने ठाउँमा फोहोर भए महानगरपालिकाले सफा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफैं खाना पनि नखुवाउने, फोहोर पनि सफा नगर्ने, महानगरको के काम ?’ उनको प्रश्न छ ।
महानगरपालिकाचाहिँ जसरी पनि निःशुल्क खाना वितरण रोक्ने तयारीमा छ । यो अभियानले आफ्नो आलोचना बढाएकाले मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पहिल्यैबाट अनुदार रहँदै आएका छन् । यद्यपि प्रवक्ता डंगोलचाहिँ रोक्नभन्दा व्यवस्थित गर्न लागेको दाबी गर्छन् । महानगरले भोका नागरिकको वास्ता नगरेको भन्ने आरोपको उनले खण्डन गरे । उनका अनुसार लकडाउनको सुरुवाती महिनामा महानगरका सबै वडा कार्यालयले निःशुल्क खाना खुवाएका थिए । ‘मेरै १५ नम्बर वडामा दैनिक २ हजारलाई खाना खुवाएका थियौं तर नागरिकहरूले नै यसरी समूहमा खाना खुवाउन हुँदैन, संक्रमण बढ्छ भनेर गुनासो गरेपछि हामीले रोक्यौं,’ डंगोल भन्छन्, ‘नागरिकले माग गरे भने हामी फेरि खानाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, त्यस्तो माग भएको छैन ।’
निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेका अभियन्ताहरूले महानगरलाई जस नदिएकोप्रति पनि उनले रोष पोखे । ‘अहिले महानगरले केही नगरेको, हामी मात्र सर्वेसर्वा हौं, हामीले मात्र भोकालाई खुवायौं भनेर हल्ला गरिरहेको छ, यो गलत हो ।’ उनको यही अभिव्यक्तिले निःशुल्क खाना वितरण रोक्ने निर्णय गर्नुपछाडिको महानगरको खास नियत झल्कन्छ । त्यसैले त लामो समयदेखि खाना खुवाइरहेका गुप्ता, ढुंगानालगायत अभियन्तासँग छलफल गर्न महानगरले आवश्यक ठानेन ।
बरु उल्टै डंगोलले अभियन्ताहरूलाई निहुँ नखोज्न, बरु आफूहरूसँग छलफलका लागि आउन आग्रह गरे । उनले खुला ठाउँभन्दा पार्टी प्यालेस उपयुक्त विकल्प हुने बताए । पार्टी प्यालेसहरू खाली भएकाले अभियन्ताहरूले चाहे महानगरले समन्वय गरिदिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निःशुल्क खाना खुवाउनै हुन्न, रोक्नैपर्छ भनेको होइन, व्यवस्थित गरौं भनेका हौं । तर, पहिले जहाँ खुवाएका हौं, त्यहीं खुवाउँछौं भनेर चल्दैन, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ,’ डंगोलको प्रश्न छ, ‘निःशुल्क खुवाउने भन्दैमा विष्णुमतीको फोहोरको डंगुरमाथि खुवाएको ठीक हो त ? खाने र हेर्ने दुवैलाई सन्तोष हुनुपरेन ?’
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०७:०३
चियाबारीमा लिंगेपिङ र एक्सरसाइज पार्क
कार्तिक १८, २०७७ विप्लव भट्टराई
इलाम — सदरमुकामको विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत रमिला काफ्ले शुक्रबार इलाम चियाबगानमा रहेको लिंगेपिङ खेल्न प्रतीक्षामा थिइन् । उनीसहित टिममा रहेका सबैले घण्टौं त्यहाँ बिताए । परिवारसहित त्यहाँ भेटिएका भवानी गौतमभन्दा धेरै खुसी उनका बालबालिका पार्कमा भेटिन्थे ।
झापाबाट ससुराली आएका पारस राईलाई पनि छ्यांग खुलेको आकाशमुनि देखिएको हराभरा चियाबारी, पार्कमा राखेका विभिन्न एक्सरसाइज सामग्री र यसपटक बिरलै देखिएको लिंगेपिङले दिन बिताउन कठिन भएन ।
कोरोना महामारीका कारण यसपटकको चाडबाडमा खासै रौनक आएन । गएको चैतदेखि नै लकडाउन खेप्ने बानी परेकाहरूले घरघरमै बसेर पर्व मनाए । कोरोनाको प्रकोप तत्काल नहट्ने संकेत देखिए पनि दसैं–तिहारजस्ता चाडबाड र पर्यटकीय मौसम भएकाले इलाम बजार नजिकैको चियाबारीमा रहेको निःशुल्क एक्सरसाइज पार्कमा धेरैले मन बहलाउने गरेका छन् ।
विद्यालय बन्द भएकाले ८ महिनादेखि बालबालिका घरमै बन्धकझैं छन् तर यही बेला हराभरा चियाबारीबीच खोलिएको यो पार्कले बालकालिकालाई मन बहलाउन गतिलै सहयोग पुगेको छ । इलाम बजार आसपास र घुमघामका लागि आएकाहरूका लागि यो पार्क अब्बल विकल्प बनेको हो । ‘घरमा मात्रै बस्दा बालबालिकाको दिमागमै नकारात्मक असर परिरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘पर्याप्त सुरक्षा सजगता अपनाएर बेलामौकामा बालबालिकालाई यस्तो रमाइलो गर्ने अवसर मिलाउँदा उति फरक नपर्ला ।’
इलाम नगरपालिका पर्यटन समितिले पार्क सञ्चालन गरेको हो । यही पार्कमा दसैंको अवसरमा लिंगेपिङमा हुइँकिएर चिया बगानको दृश्यमा रम्ने अवसर मिलाइएपछि आसपासका होमस्टे र ससाना व्यवसायीलाई पनि राहत मिलेको छ । ‘कोरोना महामारीले व्यवसाय ठप्प रहेकाले दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन छ,’ मुकुमलुङमा होमस्टेका सञ्चालक भीम एक्तेनले भने, ‘सुरक्षा सावधानी अपनाएर भए पनि व्यवसाय धेरथोर चलाउन पाउँदा केही राहत भएको छ । किरातहरूको मौलिकता झल्कने प्रतिमासहित किरात राईहरूको धार्मिक स्थल पनि रहेकाले त्यहाँ पुग्नेका लागि समय बिताउन थप सहज भएको छ । लामो समयदेखि घरमै रहेका बालबालिकालाई मन बहलाउन र ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसायलाई ब्युँताउन गरिएको यो प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने सरोकारवालाले सुझाउँदै आएका छन् ।